HTC dia tsy handefa Android Wear smarwatch | Vaovao momba ny gadget
HTC dia tsy manao famantaranandro Android Wear
Amin'izao andro lasa izao nisy tsaho tonga izay nampiseho sary izay mifandraika amin'ny fanombohana mety amin'ny smartwatch voalohany nataon'ny orinasa Taiwanese HTC. Tsy vao sambany no nahare vaovao momba an'io trangan-javatra io isika, satria ity mpanamboatra ity dia iray amin'ireo vitsy mbola tsy sahy nanomana iray ho an'ny tsena.
Tsy maintsy ho mpanatanteraka HTC izay tsy maintsy tonga eo aloha handà ny vaovao mifandraika rehetra miaraka amin'ny fanamboarana ny smartwatch Android, manintona ilay vaovao niseho izay mety hahitàna smartwatch HTC miaraka amin'i Under Armor.
HTC dia nanao azy tsara nilaza fa tsy hanana famantaranandro Android izy ireo, farafaharatsiny vetivety. Azontsika atao ny mamela ity olana iray manontolo ity momba ny smartwatch voalohany novokarin'ny orinasa Taiwanese nandritra ny fotoana mahafinaritra, raha tsy hoe misy vaovao hafa momba ireo izay te-hisy fiantraikany hipoitra, na marina na tsia.
Ilay sary tafaporitsaka izay nilazana izany teo ambanin'ny fiambenana fiadiana io, na farafaharatsiny fiarahamiasa amin'ny HTC, prototypa efa somary taloha izy io ary tsy misy na inona na inona mety hiasa eo amin'ny orinasa. Ny antony iniana ny fisehoan'io sary io dia tsy fantatra, noho izany dia hamela fisalasalana kely isika izay ahafahan'ny HTC milalao kely toa antsika, amin'ny faran'ny andro, miresaka momba ny famantaranandro mety.
Ny zavatra mahaliana momba ilay tafatafa nomena ny mpanatanteraka HTC dia izy no mitazona izany dieny izao Android Wear dia tsy fahombiazana ara-barotra, izay mahatonga ny marika sasany handeha olympika amin'ny fametrahana ny tanany ao anaty koba sy fampiasam-bola azo antoka fa ho very maina, raha tsy hoe ny kinova 2.0 dia mahavita mampitombo ny fahalianany amin'ity karazana akanjo ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » HTC dia tsy manao famantaranandro Android Wear
Ny vidiny sy ny tsipiriany momba ny Meizu M5S vaovao dia voasivana
Windows 1507 kinova 10 dia hitsahatra tsy handray fanavaozana